Ziyambi Ziyambi Archives - What's On In Harare
Home Ziyambi Ziyambi
Harare News 21 August 2021
Source: Policy on children’s vaccination on cards’ – NewsDay Zimbabwe BY HARRIET CHIKANDIWA Government says it is revising its policy on COVID-19 vaccination to include children below 18 18 years after realising that they too were at risk of contracting the disease. Children under 18 as well as pregnant and lactating mothers had been excluded […]
The post Policy on children’s vaccination on cards’ appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 24 May 2021
HARARE – Embattled former Chief Justice Luke Malaba turned up for work on Monday, defying a High Court ruling which said he ceased to be a judge on May 15 when he reached the retirement age of 70. Source: Defiant Luke Malaba turns up for work, defying High Court ruling – The Zimbabwean Luke Malaba […]
The post Defiant Luke Malaba turns up for work, defying High Court ruling appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 10 January 2021
Source: Zimbabwe extends alcohol ban to supermarkets – Xinhua | English.news.cn HARARE (Xinhua) — Supermarkets in Zimbabwe are no longer permitted to sell alcohol during the coronavirus lockdown as authorities step up measures to curtail the spread of COVID-19. Under the lockdown regulations announced last Saturday, bottle stores and bars were banned from operating, leaving […]
The post Zimbabwe extends alcohol ban to supermarkets appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …